KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 27/01/2013
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် နုတ်ဆက်ပွဲ
ရဲရင့်(ကနေဒါ) ... 2/01/2013
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:37 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:24 PM No comments:
29 Jan, 2013 3:55 PM
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားညီလာခံကို ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် အစီအစဉ် မရှိသေး ကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး-KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“ကရင်တိုင်းရင်းသားညီလာခံ လုပ်ဖို့ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘာမှ မကြားမိသေးဘူး။ ညီလာခံလို့တော့ မဟုတ်ဘူးထင် တယ်။ တိုင်ပင်နှီးနှောပွဲတွေ ဖြစ်မှာပါ။ ညီလာခံကြီးကိုလုပ်မယ်ဆိုတာက ဘယ်အချိန်မှာ ကျင်းပမယ်။ ဘယ်သူတွေပါဝင်မယ်။ ဘယ်လိုကျင်းပမယ် ဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားထားတာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်လမှာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး”ဟု ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦအောင်မင်းက ကရင်တိုင်းရင်းသား ညီလာခံကို ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်း၌ ကရင် ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဟု7Day News Journal ၏ ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖို့၏(၆၄ကြိမ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်း
ဖရူဆိုမှာ အသက် (၁၁)နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးတဦး အဓမ္မပြုခံရ
ဖရူဆိုမြို့ လောဘူးဒါးရပ်ကွက်မှ အသက် ၁၁ နှစ်ရှိ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးမတဦးကို စစ်လေ့ကျင့် ရေးကျောင်း တည်ဆောက်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှ အလုပ်သမားတဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ် လို့ ဒေသအတွင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်း အခြေစိုက် အမှတ် (၁၄) စစ်လေ့ကျင်းရေးကျောင်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမားတဦးက ယခုလ (၂၄) ရက်နေ့မှာ တောထဲခေါ်ဆောင်ပြီး ပြုကျင့်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက သံသယရှိနေကြောင်း ဖရူဆိုမြို့နယ်မှ ဓမ္မဆရာတဦးဖြစ်သူ ဦးသဲရယ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“အဲဒီကလေးမလေးကို တညလုံးခေါ်သွားပြီးတော့မှ ကလေးမလေးလည်း အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သက်သေသာဓကကိုတော့ တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဆရာဝန်ရဲ့ဆေးစစ်ချက်ကို ကျနော်တို့ ထပ်ပြီးစစ်ဆေးနေတယ်။ အခုချက်ချင်းတော့ ကျနော်တို့ အတည်ပြုလို့မရသေးတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။” လို့ ဓမ္မဆရာ ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။
ယခုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖရူဆိုမြို့နယ် ရဲစခန်းကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ တာဝန်ရှိသူ တဦးက “ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ အဲဒါ rapes case ပါခင်ဗျား rapes case ပါ။ စခန်းမှူးနဲ့လာတွေ့လိုက်ပါ ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ အမှန်အကန်ပါပဲခင်ဗျား” လို့ ပြောပါတယ်။
ကျုရှင်သွားတဲ့ အဆိုပါ ကလေးမ ည (၈) နာရီအချိန်အထိ အိမ်ပြန်ရောက်မလာသဖြင့် မိဘ ဆွေမျိုးများက တညလုံး လိုက်လံ ရှာသော်လည်း မတွေ့ခဲ့ဘဲ (၂၅) ရက်နေ့ မနက်ကျမှသာ အမှတ်(၁၄) စစ်လေ့ကျင့် ရေးကျောင်းမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားတဦးက ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရသဖြင့် သွားရောက်စုံ စမ်းရာမှ သိခဲ့ရကြောင်း ဆရာဦးသဲရယ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“တပ်ထဲကို သွားပြီးတော့မှ စုံစမ်းကြည့်တော့ အလုပ်သမားတယောက် တကယ်ပျောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က လိုက်ရှာတယ်။ အလုပ်သမားကိုတွေ့တယ် သူက ကလေးမကို ကြိုးဖြေထားခဲ့တာကိုတွေ့ပြီး သူက ပြန်သွားဖို့ ကားသွားစောင့်နေတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ သူနေတဲ့နေရပ်ဇာတိကို ပြန်ဖို့ လမ်းဘေးမှာစောင့်နေတာ။ အဲဒါနဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုစိုးဌေးက သူ့လူ ကြယ်စင်မောင်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားပြန်တင်လာတယ်။ ဒီကိုခေါ်လာပြီး ကလေးမရဲ့ ရွယ်သူကလေး သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လာပြတယ်။ မနေ့က ခေါ်သွားတဲ့ သူက အဲဒီလူလားပေါ့ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လား ဆိုတာမေးတော့ ကလေးတွေက အဲဒီလူပဲလို့ ဖြေကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီးတော့မှ ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။”
အဆိုပါ ကလေးမအား အမှတ် (၁၄) စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အနီးတွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး လောလော ဆယ်တွင် ဆေးရုံတင်ထားကြောင်းနှင့် ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ကိုစောင့်နေကြသလို မသင်္ကာသူအလုပ် သမားအား ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ယခု ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသက် (၁၁) ရှိ ကလေးမ၏ နာမည် အပါအ၀င် မိဘတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ဖော်ပြခွင့် မရှိသလို ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်နဲ့ ရဲစခန်းရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကို ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါ တယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:44 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:18 PM No comments:
( ၂၅ . ၁ . ၂၀၁၃ ) ရက်နေ့ ညနေ ( ၅ ) နာရီ ( ၃၀ ) မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ ၊ တာမွေ သီတာမှတ်တိုင်နားမှာ တိုက်ပေါ်ကလူတစ်ယောက် ခုန်ချဖို့ လုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းပါ ။ မီးသတ် ကားတွေ ၊ လူနာတင်ကားတွေ ရောက်လာကြပါတယ် ။ အချိန်မီ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။
28 Jan, 2013 8:30 PM
ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ(ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိ မယ်လာထာ့ကျေးရွာ အနီးတ၀ိုက်ရှိ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်-KNLA တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မဲဆိပ်အခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF (၁၀၁၄)တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က သွားရောက်ပစ်ခတ်၍ KNLA တပ်ကြပ်တစ်ဦးနှင့် အရပ်သားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀နာရီက အင်အား ၂၀ ၀န်းကျင်ရှိ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သည် မဲဆိပ်မှနေ၍ မယ်လာထာ့ သို့ သွားရောက်၍၎င်းတို့ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU ဖာပွန်ခရိုင်မှ တပ်မဟာ(၅) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးစောကလယ်ဒို့က ယခုလို ပြောသည်။
၎င်းက “မဲဆိပ်နဲ့ မယ်လာထာ့ဆိုတာက ခြေလျင်နဲ့ဆို ၂နာရီ ခရီးလောက် ရှိတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် တမင်တက်လာပြီး KNLA တပ်ဖွဲ့တွေကို ချုံခိုက်တိုက်ခိုက်တာ။ တိုက်ပွဲက မိနစ် ၃၀လောက်တော့ ကြာတယ်။ တိုက်ပွဲအပြီး ကျနော်တို့ဘက်က တစ် ယောက်နဲ့ အရပ်သားတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ သူတို့ဘက်က အခြေအနေတော့ မသိရဘူး”ဟု ပြောသည်။
BGF (၁၀၁၄)တပ်ရင်းသည် ဗိုလ်မှူးစောမောင်ချစ်က ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယခုလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလတွင် KNLA အား အကြောင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် လက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း၊ ရှေ့ဆက် မဖြစ်အောင် အစိုးရဘက်တွင် တာဝန်ရှိ ကြောင်းနှင့် အစိုးရစစ်တပ်များကို ၎င်းတို့ဘက်မှ အကြောင်းမဲ့ စတင် တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း KNUဘက် က ပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးစောကလယ်ဒို့က “ကိုယ့်နယ်မြေမှာကိုယ်မနေပဲ ကျူးကျော်လာပြီး တဖက်နဲ့တဖက် ပစ်ခတ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ဘက်ကတော့စသွားတိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဘက်က လာတိုက်ရင်တော့ ပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ရမှာပဲ” ဟု ပြောသည်။
မယ်လာထာ့တွင် BGF နှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့် ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၀န်ကြီး ဦးခင်ရီတို့အဖွဲ့သည် BGF နှင့် ဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော်-DKBA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်အဖွဲ့အား မြ၀တီမြို့တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ဘီဂျီအက်ဖ်နှင့် ဒီကေဘီအေအကြား ဖြစ် ပွားသည့် တင်းမာမှုကိစ္စအပေါ် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:08 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:08 PM No comments: